FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHOW CHOW - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chow Chow
'Ity no Mpanjaka Chow Chow iray 3 taona purebred avy any Tracy's Royal Chow Chows any Ohio. Izy dia bera teddy lehibe. '
Alika goavambe ny Chow Chow. Ny lafin-javatra roa mampiavaka an'i Chow Chow dia ny lela manga-mainty sy ny tongony aoriana mahitsy, izay mahatonga azy handeha somary mikitoantoana. Lehibe sy malalaka ny loha misy karan-doha. Mivelatra sy lalina ny vavahady. Misy ruff goavambe ao ambadiky ny lohany, izay manome endrika toy ny liona. Ny orona mainty dia lehibe misy vavorona misokatra. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny sofina kely mahitsy dia miendrika telozoro ary boribory eo amin'ny tendrony. Ny maso miendrika amygdala dia milentika sy mainty ny lokony. Mivelatra sy lalina ny tratra. Atao avo ny rambony, entina manakaiky ny lamosina mihitsy. Esorina ny lalàma indraindray. Ny palitao be volo, matevina ary feno volom-borona dia misy karazany roa, malama sy marokoroko. Ny loko mahazatra indrindra dia mena mena, mainty, manga, kanelina ary crème, nefa mety ho avy amin'ny loko mena, fotsy na fotsy tsy fahita firy. Ny palitao indraindray dia misy alokaloka maivana na maizina kokoa, fa tsy miloko parti mihitsy.
Ny Chow Chow dia alika mahalala fomba. Tsara amin'ny ankizy. Raha mifankahalala amin'ny saka sy biby hafa ao an-trano izy ireo raha mbola tanora dia hifanaraka amin'izy ireo rehefa olon-dehibe. Tokony ho tsara ifaneraserana kokoa raha mbola tanora izy ireo. Mila fahefana sy fiofanana matanjaka izy ireo manomboka amin'ny alika kely. Na mandray alika kely na alika olon-dehibe ianao dia mila mametraka ny fitsipika arahin'ilay alika sy hifikirana ny tompony. Ity dia karazan-kazo lehibe indrindra izay mitaky a tompony manjaka . Ny tompon'ity karazana alika ity dia tokony ho olona tony izay matanjaka voajanahary, matoky tena ary tsy miovaova. Amin'ny mpikarakara toy izany dia afaka mivoatra tsara ny Chow Chow. Ny olana dia mipoitra rehefa miaina miaraka amin'ny tompona tsy azy ny alika mahatakatra ny fomba hahatongavana, ary mijanona ao, ny toeran'ny alpha . Raha avelanao hino ity alika ity ny lehiben'ny tranonao dia ho lasa maditra, miaro ary indraindray tsy voafehy mihitsy. Raha tsy mahatsapa ny tompony fa matanjaka be ny tompony dia hiasa mafy izy io amin'ny fitazonana azy toerana alpha ao amin'ny fonosan'ny olombelona . Rehefa mitranga izany dia tsy heveriny ho ratsy toetra izany, fa kosa avy hatrany dia milaza aminao ny fomba fifampiresahan'ny alika amin'ny tsirairay fa manapa-kevitra izy hoe rahoviana ary ahoana ny fomba hanaovana izany. Ho sitraka amin'ny sain'ny kendrena izy io ary mety tsy ho voaro loatra. Rehefa manana Chow Chow ianao izay mino fa izy no mpitondra ny olombelona , ary ny olon-tsy fantatra manery ny tenany amin'ity alika ity, dia mety ho lasa mahery setra izy, miteny amin'ny olombelona fa maniry ny hanana toerana malalaka izy. Ny toerana dia misy dikany betsaka amin'ny alika. Ny fanajana eo amin'ny tontolon'ny alika. Chow Chows izay mino fa izy ireo dia tompon'alika matetika dia alika olona iray, tena tsy mivadika amin'ny tompony, na dia mety hiaro azy aza izy, na dia miaraka amin'izy ireo aza. Ny Alpha Chow Chows dia alika manjaka amin'ny alika hafa. Chow Chow izay tsy resy lahatra 100% ny olombelona dia ny sefo no ho sarotra kokoa amin'ny fiofanana mankatò. Ny Chow dia hahatsapa ny IT dia mila manapa-kevitra hoe inona ary rahoviana no hanao zavatra fa tsy an'ny olombelona, ​​satria tsy maintsy mihaino azy ny olombelona. Tsy toetra Chow Chow ireo, fihetsika tsy voajanahary, vokatry ny fahefan'olombelona malemy paika amin'ny alika. Raha te hanana alika ianao, dia alao antoka fa ianao sy ny ankohonanao sisa dia fantaro ny fomba alpha. Ny mpianakavy rehetra, sy ny olona hafa manodidina ny alika, dia tokony ho avo kokoa noho ny alika. Ny Chow Chows dia mety ho vitsy an'isa amin'ny tompony mandalo, fa alao io alika io ihany ary apetraho amin'ny tompony izay manana fahefana voajanahary izy ary ho mahalala fomba, manam-paharetana ary tsara boribory, manao namana akaiky fianakaviana.
Nilaza ny tompona iray tamiko fa afaka manao fikafika ny Chow ary mianatra azy ireo mora foana amin'izany. Ity misy teny notsongaina avy amin'ny tompona manan-janaka telo sy saka telo:
'Ny Chow fotsy 8-taona-ko dia manao' fikafika 'isan-karazany, manomboka amin'ny fandihizana amin'ny tongony aoriana amin'ny baiko ka hatrany amin'ny fihodinana, ary ny fitsambikinana avy amin'ny tongony aoriana mankany amin'ny baiko. Fantany aza ny fahasamihafana misy eo amin'ny 'fifanomezan-tanana' sy ny 'fihomehezana', toy ny fanetsiketsehana ny volony rehefa maina na mihosin-dra rehefa avy nandro / nanosotra. Taorian'ny nahalalana ny 'fikafika' voalohany tamin'ny fahazazany dia matetika izy dia mianatra hetsika vaovao amin'ny alàlan'ny fizotran'ny ohatra telo avy amin'ireo sakaizany olombelona, ​​avy eo dia manandrana haingana ireo fe-potoana izy mandra-pahombiazany. Ny hafanam-pony hianatra sy hampifaly ireo tompony roa dia avy amin'ny fitiavany olona. Tiany ny miaraka amin'ny olona, ​​eny fa na dia olon-tsy fantatra aza. Rehefa voarahona izy, na tsy mahazo antoka ny toe-javatra iainany, dia lasa niaro haingana ny fianakaviany sy ny tranony izy. '
Hahavony: 18 - 22 santimetatra (46 - 56 cm)
Lanja: 45 - 70 pounds (20 - 32 kg)
Mora mizaka ny fahasosoran'ny maso antsoina hoe entropion izy ireo, vokatry ny tsy fetezan'ny hodi-maso ary azo ahitsy amin'ny fandidiana. Mora voan'ny tsiranoka amin'ny vavony koa ny vavony cancer , faritra mafana sy aretin-tsofina. Noho ny muzzles somary fohy dia matetika izy ireo no mievoka.
Ny Chow Chow dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Tsy mihetsika intsony izy io ao an-trano ary ampy ny tokotany kely. Mahafinaritra ny hafanana, afaka miaina na ivelan'ny trano amin'ny toetrandro mangatsiaka kokoa.
Chow Chows mety kamo, fa mila raisina a mandeha isan'andro . Ny alika izay tsy afaka mandeha amin'ny diabe isan'andro dia azo inoana fa mampiseho olana maro amin'ny fitondran-tena.
Ny fikolokoloana tsy tapaka ny palitao lava dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ilay fiakarana misandratra sy miavaka. Ity karazana ity dia mpandroaka mavesatra vanim-potoana ary ilaina ny fitandremana fanampiny rehefa alika ny alika. Shampooina maina rehefa ilaina.
Tsy fantatra ny tena niavian'ny Chow Chow, saingy fantatsika fa karazany taloha be io. Ny fôsily alika tranainy indrindra, efa hatramin'ny taona maro lasa izay, dia mitovy endrika amin'ny Chow Chow. Ny sary tamin'ny tanimanga sinoa izay mitovy amin'ny Chow Chow dia nanomboka tamin'ny 206 talohan'i Kristy. Ny Chow Chow dia mety misy ifandraisany amin'ny Sinoa Shar-Pei , satria ny fiaviany roa dia manondro an'i Shina ary samy manana ny mampiavaka azy ny vava mainty sy manga. Mety ho nandray anjara tamin'ny razamben'ny Keeshond , Samoyed , Norkho Elkhound , ary ny Pomeranian . Ny Chow Chow dia ampiasain'ny Sinoa ho alika miasa, manao asa maro samihafa toy ny mpihaza amboadia, sable ary pheasant, ho an'ny fiompiana, sarety ary mpantsaka sled, mpiambina sambo ary fiarovana ny trano. Ny alika dia nanompo ny sinoa bebe kokoa noho izany toy ny alika miasa. Ny volon'ilay alika dia nampiasaina tamin'ny fanaovana akanjo olombelona ary mbola lanina ihany koa izy ireo, heverina ho matsiro. Tamin'ny faramparan'ny taona 1800 dia novidian'ny mpivarotra ho any Angletera ny mpivarotra. Ny anarana hoe 'Chow Chow' dia mety avy amin'ny teny pidgin anglisy hoe 'chow-chow', teny iraisan'ny rehetra ny odds ary ny vokatra novidiana avy any Atsinanana lavitra. Ny talenta sasany an'ny Chow Chow dia mpiambina sy mpiambina.
Thor the Chow Chow amin'ny 1 taona— 'Sariaka i Thor, olon-tiana, tsy mahaliana amin'ny voalohany fa olon-tiany ary toy ny bera teddy.'
Thor the Chow Chow amin'ny taona 1 eo am-pandriana manao satroka fotsy
Ity dia Chow Chow volom-bolo ary Chow Chow miloko volo. Sary natolotry ny van Juttersburch Chow Chows Smooth and Rough
King the Chow Chow amin'ny faha-3 taonany mandeha amin'ny fiara. Nampiroboroboan'ny Tropy's Chow Chow any Ohio
'Ity i Dozer amin'ny 1 ½ taona. Mbola be filalaovana izy ary sariaka be. Dozer dia milalao baskety sy misakafo. Mahafinaritra miaraka amin'ny ankizy izy ary tia mifanerasera amin'ny alika hafa. Tamin'ny 2 taona Dozer dia lasa dadany. Izy no ray aman-dreny reharehan'ny bera teddy kely mahafinaritra 6. '
Dozer ny crème Chow Chow amin'ny 1 1/2 taona mandry
Ity dia Khan rehefa olon-dehibe. Sary nalain'i John D. Jackson
Ity i Khan the Chow Chow amin'ny alika kely 8 herinandro. Sary nalain'i John D. Jackson
Hijery ohatra hafa momba ny Chow Chow
Sary Chow Chow 1
Sary Chow Chow 2
Sary Chow Chow 3
Sary Chow Chow 4
Sary Chow Chow 5
Alika Chow Chow: sary an-tsokosoko voaangona
alika 50 pounds na latsaka
alika kely amerikana bulldog sy boxer afangaro amidy
mixer spaniel golden retriever